Huawei yakafumura yekutanga 5G chip yemidziyo yayo | Linux Vakapindwa muropa
5Gchizvarwa chechishanu chekombuta yemagetsi, iyi tekinoroji yakagadzirirwa kuwedzera kumhanyisa, kudzikisira latency, uye kugadzirisa kushanduka kwemasevhisi asina waya. 5G tekinoroji ine dzidziso yekumhanyisa kumhanya kwe20 Gbps, nepo kumhanya kwakanyanya kwe4G kuri 1 Gbps chete.
Chinese vashandisi zviri pachena havana nguva yekutambisa se Huawei Technologies yakaratidza kuvhurwa kwefoni yayo nyowani akangwara Mate 30, processor iyo inosanganisira modem ye5G, inonzi Kirin 990, iyo inogadzirwa neChinese seyekutanga yerudzi rwayo pasi rose.
Iyo Kirin 990 5G inosvika ine yakawanda yevimbiso. Se inosiyanisa kunyanya munzvimbo nhatu: kuzvitonga, network uye kugadzirisa mafoto.
Huawei anoronga kushandisa processor iyi mumafoni ayo uye iyo Mate 30 inotarisirwa, kuburitswa munaGunyana 19, kuva chigadzirwa chikuru chekutanga chaHuawei kubvira United States payakasarudza boka reChinese kutenga tekinoroji kubva kuUnited States.
China inhanho imwe kumberi wemasimba makuru. Kuendeswa kwe Ultra-inokurumidza mobile internet, iyo 5G, inogona kutanga pakupera kwegore mune dzimwe nyika.
Musiyano uripo pakati peKirin 990 (4G) uye Kirin 990 5G
Iyo Kirin 990 ine anopfuura anopfuura mabhiriyoni gumi transistors uye inogona kudhawunirodha data pane dzidziso yekumhanyisa ye2.3 gigabits pasekondi.
Huawei inosarudza yezana-vhezheni zano reKirin 990. Idzi shanduro dzinozozivikanwa zviri pamutemo se Kirin 990 uye Kirin 990 5G.
Iine kumisikidzwa kumwe chete yakakosha, yakafanana kamera kutsigira, ndangariro imwe chete, iyo yakafanana yekuchengetedza, ese maBhaibheri anenge akafanana. Zvisinei, pane misiyano, senge mashandiro eNeurological Treatment Unit (NPU) uye makuru maficha.
Uno Chimwe chezvinhu zvakakosha zveKirin 990 5G ndiko kushandiswa kwayo kweTSMC's 7FF + neEUV, ichikubvumidza iwe kuti uve nediki diki saizi.
Inopfuura 100mm2, unova mutsauko we74.13mm2 paKirin 980 (TSMC 7nm) uye 96.72mm2 paKirin 970 (TSMC 10nm).
Ipo iyo 4G vhezheni ichiyera nezve 90mm2 ine mabhiriyoni maviri mashoma ma transistors kupfuura iyo 990 5G kirin. Iyo yekumisikidza kurongeka mune maviri mapurosesa yakafanana: maviri epamusoro-frequency A76 cores, maviri epakati-frequency A76 cores, uye ina mamwe anoshanda eA55 cores.
Zvisinei, iwo 990 5G uye 990 4G mafambiro akasiyana zvishoma. Pamusoro peiyo modem ye5G yekumisikidza, shanduko huru muKirin 990 ichave iyo yeurological processing unit.
Huawei pakupedzisira haana kupa zvakawanda nezve iyo nyowani 5G modem, kana nezve 4G dhizaini yekugadzirisa. iyo kambani yakadzivisa kududza nhamba mukati menguva inonzwisisika. Huawei ane chiitiko chezvenhau muMunich munaGunyana 19, uko Mate 30 neMate 30 Pro vanoziviswa uye pamwe zvakare modhi ye5G, ingangodaro iri Pro 5G.
Nepo mhedzisiro yenhare mbozha pahutano hweveruzhinji iri chikonzero chekufunganya sezvo ongororo yakaitwa neAmerican Association of Telecommunications Operators inoratidza kuti mumujaho wezve tekinoroji, China ndiyo yepamusoro soro kana ichienzaniswa neSouth Korea.
United States nenyika dzekuEurope dzakaita seFrance, Germany kana United Kingdom ndidzo dziri kumashure. Kana hutano hwevanhu hwave panjodzi, tekinoroji inouya yechipiri. Gore rapfuura, semuenzaniso, kanzuru yemaguta yedhorobha reCalifornia padyo neSan Francisco yakavhota vachibvumirana kurambidza kuiswa kwe5G antenna munzvimbo dzekugara dziri kure nekuda kwezvikonzero zvehutano hweveruzhinji.
'Njodzi yehutano' Aya ndiwo maratidziro evamwe vapikisi tekinoroji ye5G. Mukuita kwekuyedza mumaguta akasiyana, zvinotarisirwa kuti 5G tekinoroji ichatsiva 4G mumakore anotevera.
Asi apo patinoswedera pedyo nekuburitswa kwayo, vazhinji vanonzwikwa nezve "zvesainzi zvidzidzo" uye vanoita zvematongerwo enyika avo, sekune 4G kare uye masaisai efoni kazhinji, vanopokana kuti 5G yaizotakura njodzi dzehutano (kunyange hazvo pakupedzisira idzi ingori nharo dzevanopikisa ).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Huawei yakafumura yekutanga 5G chip yemidziyo yayo
Panguva ino, zvinoita sekunge kwandiri kuti ese anopokana-5G anoparadzira akakonzerwa zvakanyanya ne gringo kufarira pane hutano hweveruzhinji! Chero chinhu chinoenda muhondo (zvekutengesa kana kwete) ...